ဘူးသီးတောင်မြို့ရွာမကျောင်းဘုန်းကြီးမှ ဆူပူမှုဖြစ်ပွားအောင်ဖန်တီးနေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
Rakhine Straight Views
Like This Page · 22 hours ago
ဘူးသီးတောင် ။ ။ ယမန်နေ့ကဘူးသီးတောင်မြို့ရွာမဘုန်းကြီးကျောင်းဆရာတော်သည် ရွာမ (ရခိုင်ရွာ) မှရခိုင်လူမျိုး (၁၀၀) ခန့်ကိုဦးဆောင်၍ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်မောင်ကြီးထောင့် ကျေးရွာ အုပ်စုသို့ တုတ်၊ ဓား၊ပုဆိန်များဖြင့်သွားရောက်ပြီး ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၌ဒေသခံရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များက CARE (NGO) အဖွဲ့၏ အကူအညီဖြင့်စိုက်ထားသောသစ်တောစိုက်ခင်းများကိုအဓမ္မခုတ်လှဲခဲ့ကြသည်။ ရွာသားများကထိုသို့မခုတ် ရန်ချိုသာစွာပြောပြီးတားမြစ်သော်လည်း ဘုန်းကြီးကရိုင်းစိုင်းစွာပြောပြီးခုတ်မြဲခုတ်နေရာ ရွာသားများ ကသက် ဆိုင်ရာ သို့တိုင်ကြားခဲ့သည်။ သက်ဆိုင်ရာမှမည်သို့မျှအရေးမယူသဖြင့်စိုက်ခင်း၏သုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဖျက်ဆီးခုတ်လှဲပြီးယူငင်သွားခဲ့သည်။
ယနေ့နံနက်တွင်ထပ်မံသွားရောက်ပြီးကျူးကျော်ရန်စခုတ်လှဲပြန်ရာရွာသားများနှင့်ထိပ်တိုက်တိုးမည့်အနေအထားသို့ရောက်ခဲ့သည်။ သစ်ခင်းပိုင်ရှင်ရိုဟင်ဂျာများကအတတ်နိုင်ဆုံး သည်း ခံ လျက်ရှိပြီး သက်ဆိုင်ရာ မှမည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်မည် ကိုစောင့်ဆိုင်းလျက်ကြောင်း ဒေသခံတစ်ဦးက RB News သို့ပြော သည်။
အဆိုပါဘုန်းကြီးသည်မည်သည့်သီလမှမစောင့်သောဘုန်ကြိးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ အရက်သောက်၊ မိန်းမလိုက် စားသောသူဖြစ်ကြောင်း သူ့ဒကာဒကာမရခိုင်များပါမကျန်တစ်မြို့လုံးသိ သည်။ ထို့အပြင်သူသည် သူ့ ကျောင်း အတွင်းပန်းဘဲဖိုထောင်၍ဓား၊ လှံ၊ ဂျင်ဂလိ စသောလက်နက်များပြုလုပ်ပြီး၊ ကျောင်း၌ သိုလှောင် ထားခြင်း၊ ရခိုင်ရွာများသို့ဖြန့်ဝေခြင်းများပြု လုပ်လျက်ရှိသည်။ အေးစေတီ၊အလိုတော်ပြည့်စသောအခြား ဘုန်းကြီးကျောင်းများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ရိုဟင်ဂျာများအားစားနပ်ရက္ခာ၊ ဆေးဝါး၊ စီးပွားရေးစသည်တို့ပိတ်ဆို့ ရေးကို လုပ်ဆောင် နေပြီးဆူပူဖြစ်အောင်အမြဲလှုံ့ဆော်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ချည်းဖြစ်နေသောအာဏာပိုင်များးကအပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီး မူဆလင်များ အားထောင်ချနေသော်လည်း အဆိုပါရွာမဘုန်းကြီး၏ ဥပဒေချိုးဖောက်ကျူးလွန်မှုများကိုမူအရေးမယူဘဲရှိရာပြဿနာဖြစ်လာမည် ကိုဒေသခံမူဆလင်များကအထူးစိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။
This entry was posted on December 28, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← Politicide (သို့) လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအား နိုင်ငံရေးအရ အသေသတ်ခြင်း (အပိုင်း – ၃)
ပန်းတနော်တရားရုံးရောက် အချုပ်ကားပါ အချုပ်သားများကိုထမင်မကျွေးဘဲအငတ်ထား →
ရိုဟင်ဂျာများသည် တိုင်းရင်းသားလော နိုင်ငံသား။ လူလော။
ရခိုင်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်မှု့ ALP နှင့် အစိုးရ အပြန်အလှန်စွပ်စွဲ
တစ်ချိန်ကရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ( ၁၄၄ ) မျိုး နှင့် နိုင်ငံခြားသားလူမျိုး ( ၂၆ ) မျိုးရှိခဲ့